FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA WESTIEPOO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Westiepoo
Alika mena mitambatra fotsy / tera-tany fotsy mahery
Mega the Westipoo amin'ny faha-9 volana— 'Neny dia 17-lb. West Highland Terrier rainy dia 7-pounds Toy Poodle . Milanja 13 pounds izy. '
Ny Westiepoo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Westie ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Registra momba ny endrika mpamorona = Wee Poo
Mpanoratra International Canine Registry®= Westiepoo
Mega the Westipoo puppy amin'ny faha-6 volana— 'Eny, miara-mijery ilay Whisperer Alika isika! Nividy DVD nandritra ny fizaran-taona rehetra. Mianara zava-baovao isaky ny mandeha. Mega dia namana tia namana sy be fitiavana. Tsy matahotra, nefa mazava fa tsy mahery setra. Rehefa manatona alika hafa izy, ao anatin'ny fanisana 3, eo an-damosiny izy toa ny miteny hoe: “Tsy tompon'andraikitra eto aho, tsy miady amina olona iza no lehibenao” - toa ny nolazain'i Cesar tao amin'ny bokiny !! Somary sarotra ny famaky trano - fa tsara daholo tao anatin'ny 3 volana teo. Tena mahafatifaty, mampihomehy ary mifanaraka amin'ny fombafomba isan'andro. '
Mega the Westipoo puppy amin'ny 8 herinandro
Dollie the Westiepoo amin'ny faha-9 taonany— 'Tena mamy sy marani-tsaina izy. Ny reniny dia West Highland Terrier ary ny rainy dia Toy Poodle. Tiany, tiany, tiany ny olona, ​​indrindra ny ankizy !!! '
Dollie the Westiepoo amin'ny 8 volana
'Madeleine dia fifangaroana West Highland Terrier / Poodle 2,5 taona. Novidiana tamin'ny 5 volana izy ary izy no alika tsara indrindra nananako. Afaka milalao lalao izy ary be loatra, fa matetika dia kamo izy ary te handainga sy mifampiresaka amiko fotsiny. =) Izy dia mora zatra ary tiako ilay izy tsy milatsaka . Mainty mainty izy ary misy patch fotsy kely eo amin'ny tratrany. Tiany mandeha lavitra ary nibbling izay sendra nianjera tamin'ny tany an-dakozia! '
'Deogi dia West Highland Terrier / parti Poodle mix. Nividy azy tamin'ny alàlan'ny doka iray tao amin'ny taratasinay izahay. Pretty darn hendry, fa tsy dia te hihazona azy. Be loatra ho an'ny alika am-bavako. Manana zafikely 19 izahay, noho izany dia zava-dehibe tokoa fa na inona na inona azontsika, dia tokony ho tsara niaraka tamin'izy ireo izany. Samy tsara izy tamin'ny 20 taona ka hatramin'ny zaza vao teraka. '
Peppy Lepew the Westiepoo amin'ny 5 volana
Peppy Lepew the Westiepoo, 9 volana eo am-piandrasana zaza
Peppy Lepew the Westiepoo amin'ny faha-9 taonany miaraka amin'ny balaonina anaty rano. 'Omeo ahy io balloon io alohan'ny hihinananao azy!'
Max the Westiepoo (antsasaky Poodle / antsasaky Westie)
Jereo ohatra hafa momba ny Westiepoo
Westiepoo sary 1
manga maso Siberia husky alika kely
fifangaroana yorkie pekingese amidy
mini schnauzer shih tzu mifangaro